Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Ilaalada Madaxtooyada Dowlada Puntland Oo Jir dilay Suxufiyiin.
Ilaalada Madaxtooyada Dowlada Puntland Oo Jir dilay Suxufiyiin.
Madaxweynaha Maamulka Puntland, Siciid Cabdullaahi Maxamed (Deni) oo socdaal ku maraya gobollada Bari iyo Karkaar ee degaanada puntland, ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Mas’uuliyiinta gobolka iyo degmada, xubno ka tirsan golayaasha Puntland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, ayaa madaxweynaha ku soo dhoweeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Barri, halkaasoo uu hadal kooban uga jeediyay dadkii soo dhoweeyyay, isagoo u mahadceliyay.
Dhinaca kale, askar ka tirsan ciidanka madaxtooyada puntland oo la socday madaxweyne Deni, ayaa jir dil u geystay qaar kamid ah suxufiyiinta gobolka Bari oo halkaasi u tegay, in ay soo gudbiyaan warka imaanshaha madaxweynaha puntland.
Laba suxufi oo lagu kala magacaabo; Maxamuud Jamaal Maxamed (Dooxo) iyo Maxamed Axmed Salaad (Cagmadhige), ayaa jir dil iyo dharbaaxooyin daran kala kulmay,askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada oo ku sugnaa fagaaraha soo dhoweynta.
Suxufiyiintan oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in ay nabarro ka qabaan saableeyda iyo xabadka oo lagala dhacay qori-baagiisa iyo jilib, islamarkaana indhaha lagu caseeyay dharbaaxooyin kulul oo ay ciidamada sidaasi ku sameyeen Suxufiyiinta.